काठमाडौं । राजपादेखि संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक फोरम अर्थात महन्थ, उपेन्द्र र विजयकुमार गच्छदारसमेत लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा बाँधिन थालेका छन् । उनीहरुलाई गठबन्धन कस्न र तालमेल मिलाउन कांग्रेसले ठूलै सेक्रिफाइस गर्न थालेको खबर छ । कांग्रेसले जित्ने सिटहरुसमेत मधेसी र राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई
दिनुपरेकाले धेरै कांग्रेसीहरुको भाग खोसिदैछ । यहीकारण कांग्रेसभित्र ठूलै रडाको मच्चिन थालेको छ । कतै भेदभाव, कतै अन्याय र कतै माथिबाटै गाउँफर्के पाराले उमेदवार लाद्दा कांग्रेस संकटमा परेको विश्लेषण हुनथालेको छ ।
यसबाहेक पैसावाला, चन्दा दिनेहरुलाई पनि चुनावी टिकट बेच्ने खेल भइरहेको आरोप पनि लागेको छ । के कांग्रेस वाम एकता र एकीकरणबाट तर्सेर सातो गएको अवस्थामा पुगेकै हो त ? हो भने उसको सातो कसरी फर्कन्छ ? यसबारेमा कांग्रेसी विचारक, चिन्तकहरुले देउवालाई सुझाव दिन थालेका छन् र सिधा नसके घुमाएर पूर्वराजाको शक्ति आफूमा मिलाउनै पर्ने भनिरहेका छन् ।
पूर्वराजाले पनि एउटा पार्टीलाई समात्नै र सम्हाल्नै पर्ने स्थिति भएकाले नेपाली कांग्रेसभन्दा निकट अरु हुन नसक्ने अपेक्षा कांग्रेसीहरुको रहेको छ ।
अहिलेसम्म पूर्वराजाले देश र जनताको चिन्ता र शान्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सक्रिय राजनीतिमा आउने लक्ष्यण अहिलेसम्म देखिएको छैन र स्वास्थ्यले समेत पूर्वराजालाई साथ नदिएकाले धर्मसंकटको स्थितिमा पूर्वराजा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् ।
अव हेर्नुछ, वामगठबन्धनसँग मुकाविला गर्न कांग्रेसले हिन्दु र राजतन्त्रवादीलाई कसरी आफ्नो साथ र सहयोगमा उतार्ने छ ?